AmaJuni Amadoda Aphansi - Amathiphu Wemfashini Nesitayela | Amadoda aSitayela
AmaJuni Amadoda Aphansi
U-Alicia tomero | | Ukunakekelwa komuntu siqu, imfashini, Amathrendi
Kulesi siqondisi sizokunikeza okhiye abahamba phambili ukuze ifayela le- amajini emadodeni aphansi. Kungaba nzima ukuthola amabhulukwe alingana nabafana abangekho ngaphezu kuka-1,70 futhi awukwazi ukudlulisa ithuba lokwazi ukuthi ugqoka kanjani enye yezingubo ezithandwa kakhulu.
AmaJean noma ama-cowboy yilezo zingubo eziyisisekelo okufanele uhlale unayo ekamelweni lakho. Abalokothi baphume ngesitayela futhi bahlala bengenasici ngombala nangokuma. Ukuthi kuyisisekelo akusho ukuthi noma yini oyithengayo kuzoba ukukhetha okuhle kakhulu, njalo kufanele ubheke imininingwane ethile ukuze ukwazi ukulungisa ukwakheka kwayo kube okungcono kakhulu komzimba wakho.
1 Ungabukhetha kanjani ubude bamabhulukwe
2 Ukuma nombala wejean yakho
3 Ukuphakama nokuphakama kwamabhulukwe
4 Indawo okhalweni
5 Amaqhinga okuhlanganisa izingubo namabhulukwe
Ungabukhetha kanjani ubude bamabhulukwe
Lesi yisimangalo esikhulu kulawo madoda afuna ukuthola ubude obufanele bamabhulukwe awo. Amabhulukwe ngokuvamile athengiswa nge- ubude obujwayelekile, ngakho-ke uma sekuziwa ekuzizuzeni basishiyela ezifushane ngesifiso sokuthola amabhulukwe afanele. Kukhona njalo indwangu eningi, ongayisika futhi uyilungise kahle ngosizo lomthungi wezingubo, noma ukwazi ukusonga phansi kwephenti. Ngokujika okukodwa noma okubili kuphelele, elinye ithanga alibukeki.
Ukuma nombala wejean yakho
Ifomu ekahle yilelo dala ukuthambekela okwamanje. Ungasebenzisa isilinganiso esiqinile, ungayigqoki i-jean kakhulu, kepha iyangena kancane kancane yaphela kusukela ethangeni kuya eqakaleni. Ingxenye yethanga lomlenze kufanele ibe nesilinganiso ngokushuba kwawo, kwakha okwemvelo. Ingxenye engezansi, lapho amabhulukwe agcina khona, ingcono kakhulu uma iqinile, futhi kulokhu unganikeza amabhulukwe amahlandla ambalwa, ne umphumela wekhofu.
Ukuphakama nokuphakama kwamabhulukwe
Ukuphonsa kuyingxenye noma ibanga elikhona phakathi kwendiza kanye nesinqe. Isilinganiso sakho kufanele sikalwe, singabi sifushane kakhulu, singabi side kakhulu. Isibhamu esiphakeme kakhulu singaba sikhulu kakhulu futhi isibhamu esincane kakhulu singacindezela kakhulu.
Ukuphakama kwamabhulukwe kuze kufike okhalweni kufanele kube ngesilinganiso esiphakathi. Kufanele kube nendawo ephakathi kwezinqe nenkaba. Akukuhle ukubona okhalweni ngenhla kwenkaba, yize inhloso yalo ukumboza lowo omunye ukhalo kancane. Uma ulahla ibhulukwe lakho phansi kakhulu ukuwagqoka acishe ukuxegisa futhi ucishe ukhombise isitho sakho, nakanjani kuzokwenza imilenze yakho ibonakale. mfushane kakhulu.
Okufanelekile ukuthola ibhulukwe lokho kufanelana nesinqe sakho, ngakho-ke akudingeki ukuthi ubophe ibhande. Umqondo ukuthi ungazigqoki ziqine kakhulu ukuze unganiki isithombe sokuthi zizodilika lapho uzohlala phansi. Ukulingana kufanele kube okuphelele, akukho mibimbi lapho wenza ukunyakaza, noma amapokhethi angajwayelekile akha phakathi kwamaphakethe
Amaqhinga okuhlanganisa izingubo namabhulukwe
Kulabo besilisa abafushane kukhona amathiphu azokusiza ukunganiki ukubukeka okuphansi kangako. Kunezingubo ezingasizi ngalutho ukuze ukwazi ukuphrojusa olunye uhlobo lwesithombe. Izingubo ezinde ezifana nezikibha noma amahembe azilungile. Uma uthanda ukumboza okhalweni kanye nezinqulu kancane, qiniseka ukuthi le ngubo ayimbozi kude ngale kwamaphakethe ebhulukwe, ngoba ayithandi lutho.
Ngokuqondene nombala wezingubo zethoni emnyama njenge umbala omnyama noma o-navy oluhlaza okwesibhakabhaka Imvamisa yimibala enganakwa. Umphumela waso uzokwenza isibalo senziwe isitayela kakhulu, sibukeke sincane, futhi kulokhu uma sisetshenziswa ebhulukweni kuzobonakala sengathi imilenze yinde.
Uma uthanda ukugqoka izikibha noma amahembe ngohlobo oluthile lokuphrinta, imivimbo evundlile noma imigqa Ziphelele ukwenza isitayela sibe sesitayeleni futhi zivele zide. Ungazami ukugqoka izingubo obukhulu phezulu, njengamajezi amakhulu alukiwe. Azikho izikibha ezinemikhono emifushane (hhayi izikibha), ngoba zingaguqula isithombe zikwenze ubonakale mfushane.
Futhi ungayimbozi intamo ngamajezi we-turtleneck, ungasebenzisi amaduku lokho kungakusibekela. Nawe ungenza okufanayo ngamahembe, shiya izinkinobho ezimbili noma ezintathu ziqaquliwe ukuze intamo ibonakale kancane.
Uma uthanda ukugqoka ngezingubo ezahlukahlukene, noma ngezingubo 'ngokweqile', Bazokwenza ukubukeka kwakho kubonakale kufushane kakhulu. Isibonelo ukuhlanganisa amajakhethi entanta namashethi ahamba ngaphandle, noma ukugqoka isikibha nejezi ngaphezulu. Izingubo ezigqagqene azilingani ngamafuphi amadoda.
Ukuthola i-jean ephelele noma ibhulukwe alikho ikhambi elingcono kunokuthola ithuba zizame ngaphambi kokuthenga. Uma umbono wakho ukufihla iphuzu noma isici somzimba wakho kuyindlela engcono kakhulu, ngaphezu kwalokho lolu hlobo lwengubo lubalulekile ngoba luyingxenye yocezu oluyisisekelo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » AmaJuni Amadoda Aphansi
Thola iqoqo le-GAP Spain ngaye
Umshuwalense wezempilo wabantu abasha ubiza uhhafu waleyo yabantu abadala